Mourinho oo xaqiijiyay in Pogba uu dhaawac ku seegi doono kulanka Middlesbrough ee Axada – Gool FM
Tabaare Jose ayaa la waydiiyay su’aalo dhawr ah oo ku aadan dhaawaca Pogba, waxayna u dheceen sidaan:
-Miyuu ka dhaawacmay Pogba qaybta dambe ee muruqa bowdada? Mourinho ayaa ku jawaabay: Haa.
-Ma ciyaari karaa kulanka Middlesbrough? Mourinho ayaa ku jawaabay: Wuxuu ciyaari doonaa kulanka Middlesbrough ee xiliciyaareedka dambe, waxaa hubaal ah inuusan u ciyaari doonin xulkiisa qaranka isbuuca xulalka”.
-Miyuu soo laabanayaa 2-isbuuc kadib? Mourinho ayaa ku jawaabay: Haddii aan iraahdo laba isbuuc rajo badan ayaan muujiyay, dhabtii ma hubo inta uu maqnaanayo laakiin waxaa hubaal ah inuusan ciyaari doonin kulanka Middlesbrough”.